EcubWare ၄.၂.၁ လက်စွဲ - Jinhua Ecubmaker Technology Co. , Ltd.
၁။ System ပတ်ဝန်းကျင်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်စတင်ခြင်း
၁.၂ OpenGL ကို Install လုပ်ပါ
၁.၃ NET Framework 3.5 ကို Install လုပ်ပါ
၁.၄ EcubWare ကို Install လုပ်ပါ
၂.၂ Menu Bar
၂.၃.၁ EcubWare ကိုပထမဆုံးအသုံးပြုပါ
၂.၃.၂ Menu မှ Printer ကိုရွေးချယ်ပါ
၂.၄.၁ Main Menu မှတင်သွင်းသောပုံစံ
၂.၄.၂ Tool Menu မှတင်သွင်းသောမော်ဒယ်
၂.၄.၃ Mouse ဆွဲခြင်းဖြင့်တင်သွင်းသောပုံစံ
2.5 မော်ဒယ် Parameter ဆက်တင်များ
ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက် 2.6 Parameter ချိန်ညှိခြင်း
၂.၉ FDM တစ်ခုတည်းသောအရောင် 3D ပုံနှိပ်ခြင်း
2,10 FDM Dual-Color 3D ပုံနှိပ်ခြင်း
၃.၁ Laser Function ကို Menu မှဖွင့်ပါ
4. CNC ကိုထွင်းထုရာထူးအမည်
၄.၁ Menu မှ CNC function ကိုဖွင့်ပါ
အဆိုပါ function ကို၏ 4.2 Interface
၄.၄ Bitmap တင်သွင်းမှု
၄.၅ သွင်းကုန် Gcode
4.7 Shape ကိုဖန်တီးပါ
၄.၉.၁ ဖိုင်မှတ်တမ်းဖွင့ ်၍ မရပါ
၄.၉.၂ Bitmap ဖိုင်မှထုတ်လုပ်ခဲ့သော Gcode သည်နယ်နိမိတ်ကိုထိရောက်သည်
“ Ecubware” သည် FDM 3D Printing လုပ်ဆောင်ချက်၊ Laser Engraving Function နှင့် CNC carving function တို့ပါ ၀ င်သည့် multi-functional software တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆော့ဖ်ဝဲထုတ်လုပ်သည့်ဖိုင် (* ။ gcode) အားလုံးသည် EcubMaker မှထုတ်လုပ်သော TOYDIY မော်ဒယ်များအတွက်ရရှိနိုင်သည်။ utility model သည်အလုပ်လုပ်သော module များပြောင်းရန်၊ အမြန်ဖြတ်နိုင်သည့်အမြန်နှုန်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောလမ်းကြောင်းမျိုးဆက်များ၏အားသာချက်များနှင့် 3d မော်ဒယ်၏ပြည့်စုံသောမြင်ကွင်း။ နှင့် tool ကိုလမ်းကြောင်း။
Windows လည်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်: Windows7နှင့်အထက်။
ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှု - ကွန်ယက်အကြံပေးသည်
ဂရပ်ဖစ်ကဒ်: OpenGL ကိုထောက်ပံ့သည်
OpenGL သည် 2D နှင့် 3D အားနည်းချက်ရှိသောဂရပ်ဖစ်များကိုပြသသည့်ဘာသာပေါင်းစုံ၊ ပလက်ဖောင်းအမျိုးမျိုးသော application programming interface ဖြစ်သည်။ ရှုပ်ထွေးသောရှုထောင့်သုံးရှုထောင့်များကိုရိုးရှင်းသောစရိုက်များမှဆွဲထုတ်သည်။ မရှိရှိလျှင်“ Opengl 2.0” အသုံးပြုသူ၏ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိဂရပ်ဖစ်ကဒ်အတွက်သိုမဟုတ်သိုမဟုတ်အထက်ပါအချက်အလက်များသည် EcubWare ဆော့ဝဲ၏အဖွင့်နှင့်အသုံးပြုမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၊ အောက်ဖော်ပြပါပုံတွင်ပြသထားသည့်အတိုင်း system install လုပ်ပြီးလျှင်ယေဘုယျအားဖြင့် default display adapter version မှာနိမ့်သည်။
Display adapter ကိုရွေးပါ။ (system installation ပြီးနောက်ပုံမှန် display: Microsoft basic display adapter)
EcubWare ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ OpenGL driver မရှိရင်အောက်ပါအမှားပေါ်လာလိမ့်မည်။
ဂရပ်ဖစ်ဒရိုင်ဘာကို update လုပ်ပါ။ အောက်ပါပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
mouse ကို“ Web and Windows ရှာဖွေရန်” သို့ရွှေ့ပါ။
ထည့်သွင်းမှု“ Device Manager”
ပေါ်လာသည့်“ Device Manager”
“ Display adapters” နှင့်“ Microsoft Basic Display Adapter” ကိုရွေးချယ်ပါ။
（system ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်ပုံမှန် display ကို：“ Microsoft Basic Display Adapter”）
driver ကို update လုပ်ရန် right-click ကိုနှိပ်ပါ
“ update လုပ်ထားသော driver software အတွက်အလိုအလျောက်ရှာဖွေပါ” ကိုနှိပ်ပါ။
တွေ့ရှိပြီးနောက်ယာဉ်မောင်း software ကို download လုပ်ပါ
ဒေါင်းလုပ်ချပြီးနောက်ဒရိုင်ဘာ software ကို install လုပ်ပါ
ထိုအခါ software ကိုစနစ်တကျဖွင့်လှစ်ရှိမရှိကြည့်ရှုစစ်ဆေးပါ
အကယ်၍ သင်စနစ်တကျဖွင့်လျှင်ပြtheနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါပြီ ၎င်းကိုဖွင့ ်၍ မရပါကဂရပ်ဖစ်ကဒ်သည် OpenGL သို့မဟုတ်အခြားလိုက်ဖက်သောပြproblemနာကိုမပံ့ပိုးသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်.
အကယ်၍ NET Framework 3.5 နှင့်အထက်ကိုမတပ်ဆင်ပါကသင် Laser Function Software ကိုအသုံးပြုသောအခါအောက်ပါအချက်များပေါ်လာလိမ့်မည် အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း
ဖြေရှင်းချက် ၂: သင်၏ကွန်ပျူတာအင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်သောအခါ NET Framework 3.5 နှင့်အထက်ကို install လုပ်ပါ။ အထက်ပါပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်း "ဤအရာကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူပါ" ကိုနှိပ်ပါ။ နှိပ်ပြီးသောအခါ၊ အောက်ပါအခြေအနေသည်တပ်ဆင်မှုအဆုံးတိုင်အောင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
အဆင့် ၁ - installation အထုပ်ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါ， ကိုယ်တိုင်ဖြည်ချခြင်းဖိုင်ကို……
၎င်းသည်အချက်သုံးချက်ကိုစစ်ဆေးလိမ့်မည်။ ပျက်စီးခြင်းတစ်ခုစီသည် EcubWare ဆော့ဝဲလ်၏ပုံမှန်မဟုတ်သောလည်ပတ်မှုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ OK ကိုအမှန်ခြစ်ပေးပါက“ Next Step” ကို နှိပ်၍“ နောက်ကျော်သွားရန်” ကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့် ၂: လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်ပြီးနောက်နောက်ကိုနှိပ်ပါ
အဆင့် ၃: နောက်ထပ်နှိပ်ပါ
အဆင့် ၄: သင်ထည့်သွင်းလိုသောအရာကိုရွေးချယ်ပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ပထမဆုံးတပ်ဆင်မှုဖြစ်ပါကတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သောရွေးစရာအားလုံးကိုရွေးချယ်ပါ။ ထို့နောက် "Install" ကိုနှိပ်ပါ
ဤ module တွင်အသုံးပြုသောအဓိကပရင်တာသည် TOYDIY 4in1 3D Printer ပါ ၀ င်သည်（TOYDIY 4in1 FDM ToolHead / TOYDIY 4in1 FDM-Dual ToolHead）、Fantasy PRO4 နှင့် TOYDIY 4in1 3D Printer 2.0（TOYDIY 4in1 FDM ToolHead / TOYDIY 4in1 FDM-Dual ToolHead）
Main interface တွင်“ Menu Bar”၊ “ Parameter settings bar”၊ “ View Bar” နှင့်“ Model Parameter toolbar” တို့ပါ ၀ င်သည်။ ပရင်တာ၏အချက်အလက်ကို Menu bar တွင်ပြောင်းလဲပြီးကျွမ်းကျင်သောချိန်ညှိချက်များကိုဖွင့်နိုင်သည်။ parameter setting areaရိယာသည် Main functional area ဖြစ်ပြီးအသုံးပြုသူများသည်ဖြတ်ထုတ်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သော parameters အမျိုးမျိုးကိုထည့်သွင်းပြီး၎င်း parameters များကို အခြေခံ၍ ပိုကောင်းသော G-Code ဖိုင်ကိုထုတ်ပေးသည်။ View area သည်မော်ဒယ်များကိုကြည့်ရှုရန်၊ မော်ဒယ်များထားရန်၊ စီမံရန်မော်ဒယ်များ၊ အချပ်လမ်းကြောင်းကြည့်ရန်၊
EcubWare ပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်တဲ့အခါ၊ "Add Printer" ပေးတဲ့ dialog box ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းလိုချင်သော tool header နှင့်တူသောပရင်တာအမည်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် "TOYDIY 4in1 FDM ToolHead" (FDM tool header) ဖြစ်သည်။
ဆော့ဝဲလ်မျက်နှာပြင်ကိုဖွင့်ပါ၊ "ထည့်သွင်းပရင်တာများထည့်ပါ" ပင်မ menu ထဲတွင်သင်လိုချင်သည့်ပရင်တာကိုထည့်ပါ။
ဆော့ (ဖ်) ဝဲတွင်ပုံစံကိုတင်သွင်းရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် Preferences နှင့်အညီမော်ဒယ်များကိုတင်သွင်းနိုင်သည်။
“File” -“ Open File (s)”
Software ၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိ toolbar ကိုရှာပါ ，အကြား,
တင်သွင်းသောပုံစံ။ 3d ပုံစံများကို stl, obj, Dae နှင့် AMF စသည့်ပုံစံများဖြင့်သင်တင်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်သင် File menu မှ Load model File ကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် CTRL + l ကိုသုံးနိုင်သည်။ ကုလားအုတ်ဖိုင်တစ်ခုတင်ပြီးဆော့ဖ်ဝဲသည်ဘာသာပြန်၊ လှည့်ခြင်း၊ ချုံ့ချဲ့ခြင်း၊ ထင်ဟပ်ခြင်းစသောနမူနာပုံစံကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။
မော်ဒယ်ဒေါင်းလုပ်။ စာမျက်နှာပေါ်တွင်သင်သည်အချို့ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။ * .STL format နဲ့မော်ဒယ်ဖိုင်များ
မော်ဒယ်တစ်ခုတင်သွင်းရန်သင်၏ကွန်ပျူတာ၌သိမ်းထားသောမော်ဒယ်ကို နှိပ်၍ မော်ဒယ်ကို EcubWare ၏အဓိကမျက်နှာပြင်သို့ဆွဲယူပါ။
ပြီးပြည့်စုံသောပုံနှိပ်ခြင်းရလဒ်တိုးတက်စေရန်မော်ဒယ်ကိုသင့်တော်သောအနေအထားနှင့်အရွယ်အစားကိုချိန်ညှိရန်လိုအပ်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်“ Model Parameter toolbar” ကို အသုံးပြု၍ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ဒီမှာအလုပ်လုပ်ပုံပါ：
ရွှေ့မည် မြင်ကွင်းinရိယာရှိ Checkerboard ပုံနှိပ်ပလက်ဖောင်းareaရိယာဖြစ်ပါတယ်။ နှိပ်၍ ဖိထားပါလက်ဝဲ Mouse ကိုခလုတ် သင်၏မော်ဒယ်ကို Platform တွင်ပြန်လည်နေရာချထားရန်အပေါ်သို့အောက်သို့၊ ဘယ်ဘက်ညာသို့ရွှေ့ပါ။ နှိပ်၍ ဖိထားပါညာခလုပ်ခလုတ် တစ်ခုလုံးကိုပလက်ဖောင်းလှည့်ရန်။ မော်ဒယ်areaရိယာထဲမှာဘယ်နေရာမှာမဆိုထားနိုင်ပါတယ်။ လှည့်Mouse ဘီး အသေးစိတ်ကိုကြည့်ရန်ကြည့်ရှုရန် Zoom-to, Zoom-Out မော်ဒယ်လ်။
စကေး: မော်ဒယ်စကေး Transformer, သင့်လျော်သောစကေးရာခိုင်နှုန်းသတ်မှတ်။ Model ရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့် Scale ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ X, Y နှင့် Z axes များကိုကိုယ်စားပြုသော model မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ရင်ပြင်သုံးခုကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ပုံစံတစ်မျိုးကိုအများအတိုင်းတွက်ချက်ရန်ဘောက်ကွက်ကို နှိပ်၍ ဆွဲပါ။ zale factor ကိုလည်း "Scale *" ၏ညာဘက်ထောင့်မှရိုက်ထည့်နိုင်သည်။ အရွယ်အစားတန်ဖိုးအတိအကျကို ၀ င်ရိုးအရွယ်အစား၏မော်ဒယ်ကိုမည်သည့်အတိုင်းအတာအထိကိုယ်စားပြုသည်ကိုသေချာစေရန်“ အရွယ်အစား *” ၏ညာဘက်ရှိအကွက်ဖြစ်သောအရွယ်အစားထည့်သွင်းမှုအကွက်တွင်လည်းထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, စကေးသို့ခွဲခြားထားတယ်"Uniform Scaling" နှင့် "Uniform Scaling" ပုံမှန်သောယူနီဖောင်းချဲ့ခြင်းကိုဆိုလိုသည်၊ သော့ခတ်အနေအထားရှိအကြေးခွံမီနူးဖြစ်သည်။ Non-uniform အရွယ်အစားကိုအသုံးပြုရန်သော့ခတ်ကိုသာနှိပ်ပါ။ ယူနီဖောင်းမဟုတ်သောချိန်ခွင်သည် Cube ကို cuboid အဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ Reset သည်မော်ဒယ်ကိုမူလပုံသဏ္returnာန်သို့ပြန်သွားလိမ့်မည်။ မက်စ်သည်မော်ဒယ်ကိုစကေးချလိမ့်မည်။
လှည့်: Rotate ကိုနှိပ်ပါ။ မော်ဒယ်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ကွင်းသုံးခုတွေ့လိမ့်မည်။ အရောင်များသည်အနီရောင်၊ အစိမ်းနှင့်အပြာတို့ဖြစ်ပြီး X, Y နှင့် Z ပုဆိန်များကိုကိုယ်စားပြုသည်။ မောက်စ်ကိုလက်စွပ်ပေါ်တွင်တင်ပါ။ ညာခလုတ် နှိပ်၍ ဖိဆွဲခြင်းသည်သက်ဆိုင်သောဝင်ရိုးကိုထောင့်တစ်ဝိုက်လည်ပတ်စေခြင်းဖြင့်မော်ဒယ်ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများသည်ထောင့် ၁၅ ဆလှည့်ခြင်းကိုသာခွင့်ပြုသည်။ မူလအနေအထားသို့ပြန်လိုပါက Spin Menu ရှိ Reset ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ Lay flat ခလုတ်သည်မော်ဒယ်လ်ကိုအောက်ခြေမှ ပို၍ ချောမွေ့စွာအနေအထားသို့အလိုအလျောက်လှည့်ပေးသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အောင်မြင်မှုတိုင်းကိုအာမခံမည်မဟုတ်ပါ။
ကြေးမုံ မူရင်းပုံကိုထင်ဟပ်ရန်လေးခုသို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်အိုင်ကွန်နှစ်ခုကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ ပုံစံရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့် X, Y သို့မဟုတ် Z ပုဆိန်တစ်လျှောက်ရှိပုံစံကို Mirror လုပ်ရန် Mirror ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်လက်ဝဲပုံစံကိုလက်ျာလက်မော်ဒယ်တွင်ထင်ဟပ်ပြနိုင်သည်။
ပုံနှိပ်ပါ parameter သည် settings ကို "အကြံပြု" နှင့် "စိတ်ကြိုက်" parameter သည် settings ကိုသို့ခွဲခြားထားတယ်။
"အကြံပြု" ကိုပုံမှန် parameter setting ကိုအဖြစ်နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။ Model ကိုတင်သွင်းပြီးစံသတ်မှတ်ချက်အရချိန်ညှိချက်များကိုပြုလုပ်ပါ။ ထို့နောက် Gcode ကိုတင်ပို့ရန်“ Slice” ကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏ Print Setup ကိုပြုပြင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်ပုံမှန်အခြေအနေတွင်ရှိသည်။
Printer တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် drop-down menu ရှိပရင်တာကို "Add Machine" ၏အဓိကမီနူးမှတဆင့်ထည့်ရမည်။ သို့မဟုတ်ပါကပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ပစ္စည်း။ ပုံမှန်ပစ္စည်း "PLA-T200" ဖြစ်ပါတယ်။ ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများကွဲပြားခြားနားသောဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကိုထည့်လိုပါကသင် နှိပ်၍ "စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာပစ္စည်း ... " ကိုနှိပ်ပါ။ ပစ္စည်းအသစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း၊ အချက်အလက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုပြုပြင်ခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်းချိန်ညှိခြင်းစသဖြင့်။
：၀.၁ နှင့် ၀.၂၊ ပုံနှိပ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပုံနှိပ်ခြင်း၊ အနက်ရောင်အစက်အား mouse ဖြင့်ဆွဲခြင်းဖြင့်ရွေးချယ်ပါ။ နံပါတ်သည်အလွှာတစ်ခုစီ၏အမြင့်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ရွေးစရာများထဲမှနံပါတ်၊ ပုံနှိပ်ခြင်းအသေးစိတ်နှင့် ပို၍ ကြာသောအချိန်ပုံနှိပ်ခြင်းတိုသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ၀.၂ သို့မဟုတ် ၀.၂ မီလီမီတာအမြင့်သည်ပုံနှိပ်အမြန်နှုန်းပိုမိုမြန်ဆန်သည်။
：setting ကိုဖြည့်ပါ။ တန်ဖိုး၏အရွယ်အစားကိုရရှိရန်အနက်ရောင်အစက်ကို mouse ဖြင့်ဆွဲယူပါ။ ဖြည့်တင်းနှုန်းသည်အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီသတ်မှတ်ထားပါကဝန်တင်မှုအတွက်မဟုတ်ပါကအကြံပြုထားသောအဆာနှုန်းသည် ၂၀% ဖြစ်သည်။
Gradient Enable: အကယ်၍ ဖွင့်ပါကပုံနှိပ်ခြင်းအမြင့်တိုးလာသည်နှင့်အမျှဖြည့်သည့်သိပ်သည်းဆသည်ဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးလာမည်ဖြစ်သည်။
ပိုကောင်းတဲ့ပုံနှိပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်မမှန်မကန်ထွက်ပေါက်အချို့ကိုထောက်ခံဖို့လိုတယ်။ မသုံးလျှင်, protrusion ပြိုကျလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုရွေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့်မော်ဒယ်လ်အောက်သို့ ၀ င်လာခြင်း (သို့) ပုံနှိပ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန်အထောက်အကူပြုဖွဲ့စည်းပုံကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။
：အလွယ်တကူဖြတ်တောက်နိုင်သောအရာဝတ္ထုတစ်ဝိုက်သို့မဟုတ်အောက်တွင်ပြားသောareaရိယာတစ်ခုကိုထည့်သည်။ ဒီ option ကို check လုပ်ထားသောအခါ, Raft function ကို enabled ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကိုစစ်ဆေး။ မရပါကအလွှာမရှိပါ။ တိကျတဲ့ parameter သည် setting များကိုလာမည့်အပိုင်း "Print Parameter Settings ။ " တွင်တည်းဖြတ်သည်။
စိတ်ကြိုက်သတ်မှတ်ထားသောစာရင်း၊ အများအားဖြင့်အသုံးပြုသောသတ်မှတ်ထားသောအကန့်အသတ်ရှိသောစံသတ်မှတ်ထားသည့်အရာများ၊ အောက်ပါပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းသေးငယ်သည့်ခလုတ်ဂီယာ၏ဘေးတွင်ရှိသော parameters များကိုနှိပ်ပါ။
Main interface ၏ညာဘက်အောက်ထောင့်တွင် "Slicing" ခလုတ်ရှိသည်။ Slice parameters တွေကိုသတ်မှတ်ပြီးတဲ့အခါ status status က "slice", prompt button ကိုပြလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည် "ဖြတ်တောက်ခြင်း" ကိုတိုးတက်နေသည်ဟုပြောပြီး၎င်းကိုပြီးဆုံးသွားသောအခါသင်အသုံးပြုမည့်အရာများ၊ မီတာ (မီတာ) နှင့်ဂရမ် (ဂ) ရှိသည့်ပမာဏကိုဖော်ပြသည်။
ပုံစံကိုတင်သွင်းပြီးပါကမော်ဒယ်ပေါ်တွင်သင် နှိပ်၍ မော်ဒယ်ကိုလည်ပတ်ရန်လွယ်ကူသောညာဘက်ခလုတ်၊ ပေါ်လာသည့်ညာဘက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်တွေကတော့ -
စင်တာရွေးချယ်ထားသောမော်ဒယ်။ ။ ပုံစံကိုပြုပြင်ပြီး၊ တိုးချဲ့၊ ပြောင်းပြန်နှင့်အခြားလုပ်ဆောင်မှုများပြီးနောက်မော်ဒယ်ပလက်ဖောင်း၏ဗဟိုတွင်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ မော်ဒယ်စင်တာကိုပြသရန်ဤရွေးစရာကိုနှိပ်ပါ။
အားလုံးပုံစံများကိုရွေးချယ်ပါပလက်ဖောင်းပေါ်လာတဲ့ပုံစံကိုရွေးပါ။ Clear Build Plate: ပုံနှိပ်ခြင်းပလက်ဖောင်းပေါ်ရှိမော်ဒယ်များအားလုံးကိုရှင်းပစ်ပါ။
အားလုံးမော်ဒယ်များ Reload လုပ်ပါ။ ။ အကယ်၍ သင်၏ပလက်ဖောင်းပေါ်မှမော်ဒယ်တစ်ခုကိုမတော်တဆဖျက်မိလျှင်ဖျက်ပစ်ထားသောမော်ဒယ်ကိုပုံနှိပ်တိုက်သို့ပြန်ယူပြီးပြန်လည်ပြသရန်ဤအင်္ဂါရပ်ကိုသုံးနိုင်သည်။
ပုံစံများပေါင်းစည်းရန် အပြန်အလှန်သီးသန့်ပုံစံနှစ်ခုကိုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုပေါင်းစပ်ခြင်း၊ SPLIT MODEL: SPLIT ပေါင်းစည်းထားသောပုံစံ။
တစ်ရောင်စုံပုံနှိပ်ခြင်းတွင်ပရင်တာတွင်အမျိုးအစားတစ်မျိုးတည်းသာရှိသည်၊ ၎င်းကိုအထောက်အပံ့သို့မဟုတ်ပလက်ဖောင်းသည်အတူတူပင်ပစ္စည်းနှင့်ကပ်ထားသည်။ ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းကိုဖြတ်တောက်ရန်အဆင့်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
အဆင့် ၁: ပရင်တာရွေးပါ
အဆင့် ၂ - ပုံစံကိုတင်သွင်းပါ
အဆင့် ၃: အထူးလိုအပ်ချက်များမရှိပါက parameters များကိုသတ်မှတ်ပါ။ ပုံမှန်ပုံနှိပ်ခြင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များရှိနိုင်သည်။
လှမ်း ၄: အချပ်နှင့်သိမ်းဆည်းပါ
ဆော့ဖ်ဝဲလ်မျက်နှာပြင်၏ညာဘက်အောက်ထောင့်ရှိ "ဖြတ်တောက်ခြင်း" သည်မော်ဒယ်လ်ကိုဖြတ်တောက်ပါ၊ ပြုပြင်ပြီးနောက် "သိမ်းဆည်းရန်ဖိုင်" ကိုနှိပ်ပါ၊ ထုတ်လုပ်သော GCODE ဖိုင်သည် disk ထဲသို့သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။
အဆင့် 3: parameters တွေကိုသတ်မှတ်မည်
မော်ဒယ်များထဲမှတစ်ခုကိုရွေးပြီး "Extruder 1:" ပေါ်တွင်ညာခလုပ်နှိပ်ပါ။
မော်ဒယ်များထဲမှတစ်ခုကိုရွေးပြီး "Extruder 2" ကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့် 4: မော်ဒယ်ပေါင်းစည်း
Right Click နှိပ်ပြီး Merge Model ကိုရွေးပါ။
ပုံစံကိုကလစ်နှိပ်ပြီး“ ရွေးချယ်ထားသောစင်တာပုံစံ” ကိုရွေးရန်ညာဖက်နှိပ်ပါ။
လှမ်း 5: ဖြတ်ခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းပါ
ပြီးခဲ့သည့်အဆင့်တွင် software ၏ညာဘက်အောက်ထောင့်ရှိ Slicing ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက်ထုတ်လုပ်မှုဖြတ်တောက်ခြင်းလမ်းကြောင်းသို့ disk သို့ရောက်စေရန် "Save to File" ကိုနှိပ်ပါ။
ရွေးချယ်ပါ “ Laser ToolHead”
ရွေးချယ်ပါ ”ဟုတ်တယ်” EcubMakerLaser ကိုဖွင့်ရန်
ဒီဆော့ (ဖ်) ဝဲအတွက်ထောက်ပံ့ထားတဲ့ပုံမှာ - * ။ BMP, * ။ JPG၊ Png ။
①：ပင်မမီနူး။ “ ဖိုင်” menu တွင်ရုပ်ပုံဖိုင်များတင်သွင်းခြင်း၊ နောက်ဆုံးဖွင့်ထားသောဖိုင်များဖွင့်ခြင်းနှင့် 'Gcode' ကိုသိမ်းဆည်းခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ “ ဘာသာစကား” တရုတ်နှင့်အင်္ဂလိပ်အကြားပြောင်းလဲနိုင်ပြီး switch ပြီးနောက်ပြန်လည်စတင်နိုင်သည်။ “ အပို” မီနူးကို“ အွန်လိုင်းအကူအညီ”၊ “ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်” နှင့်“ မီနူး” ခွဲခြားသည်။
အရည်အသွေးမြင့် Bicubic: ချဲ့ရန်နှင့်လျှော့ချရန်အတွက်သင့်တော်သည် pixel interpolating ချောမွေ့သောပုံရိပ်များကိုထုတ်လုပ်သည်။
မီးခိုးရောင်နှင့် RGB slider များ။ အကယ်၍ သင်သည်ရောင်စုံရုပ်ပုံတစ်ခုကိုဖွင့်လျှင်အရောင်မှမီးခိုးရောင်သို့ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။ သင်ဟာကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အရောင် (Grayscale) ပုံသေနည်း (Simple Average, Weight Average or Optical Correct) ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်“ Custom” option ကိုရွေးပြီး RGB အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
မူရင်း ပင်မဗဟုသုတ အနီးဆုံးအိမ်နီးချင်း
“စိတ်တိုင်းကျclipart စသည့်ဂရပ်ဖစ်ရုပ်ပုံများကိုတင်သွင်းရာတွင်အသုံးဝင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရောင်တစ်ခု၏အမှောင် / အလင်းရောင်ကိုထိန်းချုပ်လိုသည်။
တောက်ပမှု၊ ခြားနားမှုနှင့် BW တံခါးခုံ။ တောက်ပမှုနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်သင်ပုံရိပ်ကိုအလင်းရောင်သို့မဟုတ်အလင်းရောင်အဖြစ်တိုးမြှင့်နိုင်ပြီး၊
BW option ဖြင့်ပုံတွင်အနိမ့်ဆုံးခလုတ်ကိုဖွင့်နိုင်သည်။
ဤရွေးချယ်မှုများအားလုံးသည်အမျိုးမျိုးသော tool များသည်ပုံကိုမည်သို့လုပ်ဆောင်သည်နှင့်နောက်ဆုံးရလဒ်ကိုမည်သို့သက်ရောက်သည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။ မတူညီသောပစ္စည်းများသည်လေဆာဖြင့်ထွင်းသည့်အခါကွဲပြားခြားနားစွာပြုမူကြသောကြောင့်ဤရွေးချယ်မှုများနှင့်ကစားရန်လိုချင်သောရလဒ်အတွက်အကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်မှုကိုရှာရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
③：“ line to line” နှင့်အတူ အရည်အသွေးမြင့်မားသောပုံရိပ်များကိုအစစ်အမှန်အရောင်များဖြင့်ထွင်းနိုင်သည်။ အက္ခရာထည်ပစ္စည်းများအားလုံးသည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်မသင့်တော်ကြောင်းသတိပြုပါ။ အချို့သောပစ္စည်းများသည်လေဆာစွမ်းအင်နိဂုံးနှင့်လောင်ကျွမ်းခြင်းမရှိသောကြောင့်လောင်ကျွမ်းသောသို့မဟုတ်မီးလောင်နေသောအခြေအနေမှသာမီးခိုးရောင်အတိုင်းအတာကိုထုတ်ယူရန်ခက်ခဲစေသည်။ ဤကိစ္စများတွင်ကျွန်တော်သုံးစွဲဖို့အကြံပြုအပ်ပါသည် "dithering" tool ကို.
④：လေဆာထွင်းထုသည့်လမ်းကြောင်းကိုအလျားလိုက်၊ အရည်အသွေးတန်ဖိုးကြီးလေလေ၊ အချက်ပြလေလေကာဗွန်နိုက်လုပ်ဖို့ပိုလွယ်လေလေဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောတန်ဖိုးများကိုမတူညီသောပစ္စည်းများအရသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အကြံပြုထားသောတန်ဖိုးများသည်သစ်သားပစ္စည်းများအတွက် ၁၀ တန်း / မီလီမီတာနှင့် ၅ တန်း / မီလီမီတာဖြစ်သည်။
⑤：ထွင်းထုသောအမြန်နှုန်းနှင့်ပုံအရွယ်အစားကိုသတ်မှတ်ပါ။ ထွင်းထုသည့်အမြန်နှုန်းသည် ၃၀၀ ခန့်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်တိုင်းတာထားသောအရာဝတ္ထုနှင့်လည်းချိန်ညှိနိုင်သည်။ width နှင့်အမြင့်သည်ထွင်းထုခြင်း၏အရွယ်အစားကိုကိုယ်စားပြုသည်။
：လက်ယာရစ် 90 °သတ်မှတ်ပါ ：လက်ယာရစ်နာရီ 90 °ခန့်သတ်မှတ်ပါ
：ပုံဖြတ်ရန် ：Inver အရောင်
⑦လေဆာထွင်းထုသည့်အကြိုမြင်ကွင်း: အဆိုပါစံပြအကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်မှန်နှင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသည်။ မူရင်းပုံ - တင်ထားသောမူရင်းဓာတ်ပုံ
⑧：ဂရပ်ဖစ် display areaရိယာ
⑨တင်သွင်းမှု - ဓာတ်ပုံဖိုင်များကိုတင်သွင်းပါ။ အချပ် - ဂရပ်ဖစ်ကိုစက်မှအသိအမှတ်ပြု gcode ဖိုင်များအဖြစ်သို့ကူးပြောင်းပါ။ သိမ်းဆည်း: gcode ဖိုင်အဖြစ်သိမ်းဆည်းပါ။
Bitmaps: * .bmp, * png, * gif နှင့် * .jpg
Vector Graph (Optimizing): * ။ svg
Carving Parameters ချိန်ညှိခြင်း：
သူတို့ထဲတွင်: "အရည်အသွေး" အချက်သည်သိပ်သည်းလေ၊ တန်ဖိုးကြီးလေလေ၊ ပြသမှုသည်သိပ်သည်းလေ၊ ရည်ညွှန်းအစုလိုက်တန်ဖိုးသည် ၁၀ ဖြစ်သည်။
မြန်နှုန်းကိုထွင်းထု: ပန်းပုareaရိယာရှိလေဆာခေါင်း၏ရွေ့လျားမြန်နှုန်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်ပစ္စည်းများ၏အကြံပြုတန်ဖိုးသည်မြင့်မားလွန်းသင့်သည်။
ထွင်းထုသည့်အမြန်နှုန်း (မီလီမီတာ / မိနစ်)
အရည်အသွေး (လိုင်း / မီတာ)
Ecubmaker မှထုတ်လုပ်သော TOYDIY မော်ဒယ်လ်၏ software ကိုထွင်းထုရာတွင်ဤဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုသည်။ vector map၊ bitmap၊ Gcode preview တင်သွင်းရန်အထောက်အပံ့။
ရွေးချယ်ပါ ”CNC ToolHead”
ရွေးချယ်ပါ ”ဟုတ်တယ်” EcubMakerCNC ဖွင့်ရန်
①：ပွင့်လင်း button ကို file ။ Vector graph သည် "* ။ SVG", "DXF" ကိုဖွင့်နိုင်သည်။ Bitmap ဖိုင်များသည် "* ။ JPG", "* ။ JPEG" * ကိုထောက်ပံ့သည်။ BMP "," * ။ GIF "," * ။ PNG "။
③：ပုံဆွဲချဲ့ပါ။ x နှင့် y သည် ၁၈၀ မီလီမီတာထက်ကြီးလျှင်၎င်းသည်ပလက်ဖောင်း၏အကွာအဝေးနှင့်မညီပါကဂရပ်ဖစ်အရွယ်အစားသည်အနီရောင်သတိပေးမှုကိုပြလိမ့်မည်။
④：ပုံသဏ္ာန်လှည့်။ ၎င်းသည် 90 °လက်ယာရစ်၊ ထောင့်ချိုး 90 °၊ လှန်၊ အလျားလိုက်မှန်နှင့်ဒေါင်လိုက်မှန်တို့ကိုထောက်ပံ့သည်။
⑤：Parameter ဆက်တင်များ။ ထွင်းထုသည့်အမြန်နှုန်း၊ ထွင်းထုသည့်အတိမ်အနက်နှင့် Z အမြင့်ကိုထွင်းထုပြီးပါကသတ်မှတ်ထားပါ။ setting ပြီးနောက် software ကို restart လုပ်ပါ။ ထွင်းထုသည့်အရှိန်သည်ပန်းပုအကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်သက်ရောက်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောထွင်းထုပစ္စည်းများ၏ထွင်းထုမြန်နှုန်းကွဲပြားခြားနားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သေးငယ်လေပိုကောင်းပေမဲ့ကြာကြာကြာလေလေဖြစ်သည်။
⑥：အချည်းနှီးသောလမ်းကြောင်း၏ပြသမှုအတွက်, ပုံဆွဲတင်သွင်းမှုနှင့်သိမ်းဆည်းတဲ့အခါဒီ option ကို check လုပ်ထားရမယ်, မဟုတ်ရင်ထွင်းခြင်းတိဖြစ်လိမ့်မည်။
⑦：ဂရပ်ဖစ် display areaရိယာ။ preview areaရိယာ။
အဆိုပါထောက်ခံအားနည်းချက်ကိုဂရပ်ပုံစံများ * ဖြစ်ကြသည်။ SVG နှင့် * ။ DXF, သို့သော်အားလုံးမထောက်ခံအားနည်းချက်ကိုဂရပ်များဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။ DXF ဖိုင်များ။
မှတ်ချက် - ယေဘူယျအားဖြင့်၊ အထောက်အပံ့ပြုသည့် bitmap အမျိုးအစားအားလုံးကိုဖွင့်နိုင်သည်၊ သို့သော်အချို့သော bitmaps များသည်ဆော့ဝဲလ်သို့တင်သွင်းပြီးနောက်၎င်းတို့ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှိသည်။
ဖန်တီးရန်ဖန်တီးထားသောစာသားကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲသည်ကယ်ဆယ်ရေးဖန်တီးမှုကိုအထောက်အပံ့မပေးသော်လည်းကယ်ဆယ်ရေးကိုဖန်တီးရန်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Autodesk ကုမ္ပဏီ၏ fusion360 ဖြစ်သည်။ အသေးစိတ်အတွက် "fusion360 create relief download address" နှင့် "fusion360 create relief tutorial" ကိုဖတ်ပါ။
ဂ။ ဂရပ်ဖစ်ပြProbleနာများ (လိုင်းအရောင်၊ စာဝှက်ဖြင့်စသည်)
vector file ထုတ်လုပ် Tool ကိုပြproblemနာ။
ယေဘုယျအားဖြင့် Bitmap ဖိုင်ကိုယ်တိုင်လိုင်းသို့မဟုတ်အရောင်ပြproblemsနာများနှင့်အတူ။
ခ။ တင်သွင်းသောဆော့ဝဲလ်ပါသော SVG အမျိုးအစားဖိုင်။ သင်စိတ်ကြိုက် image ကိုထပ်မံတင်သွင်းနိုင်လျှင်။
Software ကို Restart လုပ်ပါ